Amma Vodi App Download ho an'ny Android [2022 Update]
March 24, 2022 Janoary 15, 2022 by Reyan Ahmad
Raha mila fanampiana avy amin'ny governemanta ianao, dia eto izahay miaraka amin'ny fampiharana tsara indrindra ho anao. Amma Vodi App dia rindranasa Android, izay manolotra ny mpampiasa hiditra amin'ny drafitra Amma Vodi ary hahazo fanampiana ara-panabeazana avy amin'ny governemanta. Manome ny mpampiasa hahita ny pitsopitsony rehetra mora foana izy io ary hahazo ny mombamomba azy rehetra.
Andhra Pradesh dia iray amin'ireo fanjakana any India, izay manolotra fanjakana fambolena tsara indrindra ao amin'ny firenena. Izy io dia manome ny fanangonana landihazo, Sugarcanes, Chili, ary vokatra maro hafa tsara indrindra. Ny fanjakana dia manome mihoatra ny 28 isan-jato amin'ny GSDP. Saingy ny sehatry ny fanabeazam-pirenena dia tsy dia tsara loatra tamin'ny taona lasa, izay iray amin'ireo asa sarotra indrindra tokony hatsaran'ny governemanta.
Noho izany, ny governemanta dia manome tetika samihafa, izay ahafahan'ny olona manintona mankany amin'ny sehatry ny fanabeazana. Misy tetikady samihafa natolotra talohan'ity tetikasa ity saingy tsy nety tamin'ny vahoaka. Mampahafantatra ity tetik'asa ity ny tompon'andraikitra, izay ahafahan'ny olona mahazo fanampiana mivantana avy amin'ny governemanta.
Noho izany, eto izahay miaraka amin'ity rindranasa ity, izay ahafahan'ireo mpampiasa mahazo ny vaovao rehetra momba ity tetikasa ity. Raha vonona hampiasa an'ity fampiharana ity ianao dia amporisihinao izahay hahafantatra momba izany. Noho izany, mijanona miaraka aminay fotsiny ary mahazoa ny fampahalalana rehetra mifandraika amin'ity app ity.
Topimaso momba ny App Amma Vodi
Izy io dia rindranasa Android, izay manolotra ny mpampiasa hahazo ny pitsopitsony rehetra momba ny tetikasa Amma Vodi. Manolotra ny fanangonana fampahalalana rehetra, izay misy ny mombamomba ny mpisitraka izany. Noho izany, ny mpampiasa dia afaka mahita vaovao mora foana momba ny fisafidianana olona. Sehatra misokatra izy io, izay manome maimaimpoana ny serivisy rehetra.
Ity fampiharana ity dia novolavolaina manokana ho an'ny olom-pirenena ao Andhra Pradesh, India, izay midika fa ny fanjakana hafa sy ny mpampiasa firenena dia tsy mahazo miditra amin'ireo serivisy misy. Noho izany, mamporisika anao izahay tsy handany fotoana raha tsy mifandray amin'ity fampiharana ity ianao.
Etsy ankilany, raha olom-pirenen'ny Andhra Pradesh ianao, dia io no sehatra hidiranao hiditra amin'ny tetikasa fanabeazana tsara indrindra amin'ny fanjakanao. Manolotra ny mpampiasa hampiasa nomeraon-telefaona iray hisoratra anarana sy hijerena ireo serivisy rehetra misy.
Amma Vodi Apk dia manome tombotsoa hahazo vola 15,000 tsirairay avy, izay nalefa mivantana any amin'ny kaontin'ny mpandray tombony. Izy io dia manome ny fomba tsotra sy mangarahara indrindra amin'ny fifampiraharahana ho an'ny olona mba hahazoana mora amin'ny tombontsoa azo.
Ny olona, ​​izay tsy nangataka ho an'ny tetikasa dia afaka misoratra anarana ihany koa amin'ny alàlan'ity rindranasa ity ary mampihatra ireo serivisy rehetra misy. Mitaky ny sasany amin'ny fampahalalana fototra momba ny mpianatra sy ny fianakaviana izany, amin'ny alàlan'izy ireo dia afaka mangataka mora foana amin'ny loharanom-bola rehetra misy.
Misy endri-javatra an-taonina misy ao amin'ity rindranasa ity, izay ahafahan'ny mpampiasa mahazo ny tombony. Noho izany, azonao atao ny misintona ny fitaovana Amma Vodi For Android ary mahita ny serivisy rehetra azo ampiasaina amin'ity fampiharana ity. Raha manana fangatahana momba an'ity fampiharana ity ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
Manome fomba tsotra hifandraisana aminay izahay, izay ny fizarana hevitra etsy ambany. Ny rindranasa dia manohana ny fiteny sinoa fotsiny mba hananan'ny mpampiasa traikefa namana kokoa. Noho izany, raiso ity rindrambaiko ity ary tadiavo ireo fiasa rehetra misy ary mahazoa tombony amin'ny tetik'ady.
anarana Mama Vodi
Anaran'ny fonosana com.westgodavari.amma_vadi
Developer Mpanangona distrika, West Godavari
Ilaina ny fanampiana kely indrindra 4.0.3 sy Ambony
Fisoratana anarana ilaina
Raiso ny antsipirian'ny fianakaviana
Fomba fisoratana anarana tsotra
Misy ny lisitry ny mpahazo tombontsoa
Tohano ny fiteny sinoa
Tsy misy doka misy amin'ny antoko fahatelo
Fampiharana mitovy aminy kokoa ho anao.
App Jagananna Vidya Kanuka
Raha te-hisintona an'ity fampiharana ity ianao dia eo amin'ny toerana mety. Izahay dia hizara ny dingana fampidinana haingana indrindra, miaraka aminareo rehetra. Mila manao paompy fotsiny ianao amin'ny bokotra fampidinana, izay misy eo amin'ny ambony sy ambany eto amin'ity pejy ity.
Amma Vodi App no ​​sehatra tsara indrindra ho an'ny mpampiasa hahazoana ny fampahalalana rehetra mifandraika amin'ny fanohanana ara-panabeazana. Noho izany, alao ny fampiharana ary tadiavo mora foana ny serivisy rehetra misy. Raha mila fampiharana sy hacks mahavariana kokoa, tsidiho hatrany ny tranokalanay.
Sokajy Apps, Social Tags Amma Vodi Apk, Amma Vodi App, Amma Vodi Ho an'ny Android Post Fikarohana
Fampidinana fampiharana Allu Arjun Army ho an'ny Android 
OG WhatsApp Pro Apk Download ho an'ny Android [2022 Update]